माटो जोगाउन विद्यार्थीहरूको सहभागिता
यस धरतीमा माटोको विनाश रोक्न विश्वभरिका युवाहरू एकजुट हुनको लागि यो अद्वितीय अवसर हो ।
आउनुहोस्, उल्लास र उमङ्गले माटो जोगाऔँ !
माटोसँग परिचित हुनुहोस् !
सानो भिडियो हेर्नुहोस् अनि एउटा रमाइलो खेलमा सहभागी भई आफ्नो पैतालामुनिको चमत्कारिक संसारको बारेमा थप जान्नुहोस् ।
सङ्कल्प लिने पेज बनाई आफ्ना साथीहरूलाई माटोको बारेमा जानकार बन्न र सेयर गर्न आमन्त्रण गर्नुहोस् ।
प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहोस्
आफ्नो सहभागिताको लागि सम्मानस्वरूप प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहोस्, अनि आफ्ना साथीहरूलाई पनि सहभागी हुन प्रेरित गर्नुहोस् ।
यदि तपाईं नाबालिक (१८ वर्षमुनिको) हुनुहुन्छ भने, आमाबुबा वा अभिभावकले निम्न फारम भरिदिनु पर्नेछ ।
पासवर्ड फेरि भर्नुहोस्*
शैक्षिक संस्था (वैकल्पिक)
बसोबास गर्ने देश*
मेरो उमेर १८ वर्षभन्दा बढी छ ।
पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
यो किन जरूरी छ ?
आफू जानकार बन्ने अनि अरूमाझ सन्देश फैलाउने सरल कार्यको माध्यमले, माटोप्रति आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्न र हाम्रा नेतृत्वकर्ताहरूलाई एउटै आवाजमा सहायता गर्नको लागि हामी सशक्त बन्दछाैँ ! हामी सबैको विशाल समर्थनले आवश्यक प्रभाव सृजना गर्दछ, जसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
यस अभियानलाई फैलाउन चालिने सानो पाइलाले पनि यस अभियानलाई शक्तिशाली लहर बनाउन ठूलो सहायता गर्नेछ । अभियानको विशाल समुद्रमा अफूले फैलाउने सन्देश थोपासरह भएता पनि, एउटा थोपलाई सानो नसम्झिनुहोस्, किनकि एउटा थोपा आफैँमा समुद्र हो !